Ahitra - Geofumadas
Rafitra fampahalalana jeografika: horonantsary fanabeazana 30
Ny geolocation intrinsika saika amin'ny zavatra rehetra ataontsika, amin'ny fampiasana fitaovana elektronika, dia nahatonga ny olana GIS maika hampiharina isan'andro. 30 taona lasa izay, ny firesahana momba ny fandrindrana, ny làlana na ny sarintany dia raharahan-javatra nitranga. Ireo manam-pahaizana manokana momba ny sarimiaina na mpizahatany izay tsy afaka manao raha tsy misy ...
Fampianarana CAD / GIS, jeospatial - GIS, Pirinty voalohany
Ilaina ve ny mianatra Java?
Ankoatra ny OpenOffice, Vuze, Woopra, na ny applet izay aseho amin'ny pejin-tranonkala sasany, dia miorina amina rafitra ho an'ny finday, TV, GPS, ATM, programa momba ny asa aman-draharaha ary maro amin'ireo pejy izay andehananay isan'andro no mandeha ao Java. . Ity sary manaraka ity dia mampiseho ny fananan'ny haitao Java faritra miavaka amin'ny ...
jeospatial - GIS, GvSIG, qgis
Mpianatra mieritreritra ny Open Source Geospatial
Ity lahatsoratra ity dia mifototra amin'ny famelabelaran-kevitra natao tao amin'ny FOSS4G tany Barcelona tamin'ny volana septambra 2010 avy amin'i: Iraklis Karampourniotis sy Ioannis Paraschakis - avy amin'ny Oniversite Aristotle ao Tesalonika Zoi Arvanitidou - avy amin'ny Oniversiten'i Aegean Nampitain'i Gabriel Reyes tamiko ny rohy. mifototra amin'ny fanontaniana, raha toa ka ...
Fampianarana CAD / GIS, jeospatial - GIS, qgis
118 themes avy amin'ny FOSS4G 2010
Ny tsara indrindra azo avela amin'ireo hetsika ireo dia ny fampisehoana PDF izay tena azo ampiharina amin'ny resaka fiofanana na fandraisana fanapahan-kevitra; bebe kokoa amin'izao fotoana izao fa ny tontolon'ny geospatial malalaka dia matotra amin'ny fomba mahagaga. Ohatra tsara amin'ny famoronana noforonin'olombelona, ​​izay manodina sy ...
ArcGIS-ESRI, Fampianarana CAD / GIS, jeospatial - GIS, GvSIG, qgis, uDig
SEXTANTE, + 220 routines ho an'ny gvSIG
Tahaka ny famenon'ny GRASS an'i Quantum GIS, SEXTANTE dia manao izany amin'ny gvSIG, mitazona ny specialty. Izy ireo dia iray amin'ireo ezaka fiaraha-miasa tsara indrindra eo amin'ireo mpisolo toerana open source ao amin'ny tontolon'ny geospatial, mitady hisorohana ny fanaovana kopia. Ny ezaka nataon'ny gvSIG hijanona amin'ny fitantanana vector miaraka amin'ny fahaiza-manao CAD maro dia ...
gvSIG, izay ao amin'ny 5tas. andro
Efa navoaka ny kinova fanombohana ny amin'ny kaonferansa gvSIG fahadimy hatao ao amin'ny ivon-kevitry ny hetsika Valencia, ny 2 hatramin'ny 4 desambra 2009. Ny ankamaroan'ny asa hatolotra dia avy any Espana, na dia misy aza ny traikefa sasany Alemana, Italia ary ny faritra hafa. Miantso ny ...
jeospatial - GIS, GvSIG
GvSIG fiofanana any Valencia
Manomboka amin'ny telovolana voalohany amin'ny taona 2010, ny Ivotoerana Fanofanana ao amin'ny Oniversite Florida dia hanompo taranja gvSIG, izay nampianarina ho mpamatsy ny diplaoman'ny fizahan-tany momba ny fizahantany ao anatiny. Ilay maharitra 20 ora mandritra ny tapa-bolana dia natokana ho an'ireo matihanina, teknisianina ary mpiasam-panjakana te hiditra amin'ny ...
Fampianarana CAD / GIS, GvSIG
GIS portable, ny zava-drehetra avy amin'ny USB
Navoaka ny kinova 2 an'ny Portable GIS, rindranasa mahafinaritra tsotra fotsiny ho azo avy amin'ny kapila ivelany, fahatsiarovana USB ary fakan-tsary nomerika aza ireo programa ilaina amin'ny fikirakirana ny fampahalalana momba ny habaka na eo amin'ny birao na amin'ny Internet. Ohatrinona ny lanjan'ny rakitra installer 467 MB, saingy ilaina izany rehefa ...
jeospatial - GIS, GvSIG, qgis, uDig
GvSIG: Ny tombontsoa avy amin'io asa io sy ny varotra hafa
Ny fomba matotra ireo fitaovana maimaimpoana, taona vitsivitsy lasa izay, miresaka momba ny GIS maimaim-poana, dia toa UNIX, toa ny feon'i Geek sy ny tsy fahatokisana noho ny tahotra ny tsy fantatra. Izay rehetra niova be tamin'ny fahasamihafan'ny vahaolana efa matotra tsy amin'ny fananganana ...
Quantum GIS, sary voalohany
Ny lahatsoratra dia mamerina ny fanavaozana voalohany ny Quantum GIS, tsy nanadihady ny fanitarana; manao fampitahana amin'ny gvSIG sy ny fampiharana hafa
DGN GPS Grass gvSIG OS KML kml hatramin'ny dxf samy hafa GIS mapserver Ny fahatsapana voalohany shp
jeospatial - GIS, GvSIG, Pirinty voalohany, qgis
Modely amin'ny fandrefesana ny kalitaon'ny Free Software
Ity antontan-taratasy ity dia navoakan'ny Departemantan'ny fikirakirana sy ny rafitry ny Oniversite Simón Bolívar sy ny vaomieram-pirenena misahana ny fifandraisan-davitra any Venezoela CONATEL, nahitako izany tamin'ny alàlan'ny tambajotran'io firenena io antsoina hoe geomatika maimaimpoana ary tena mahaliana aingam-panahy hamindra ny ...
jeospatial - GIS, GvSIG, fanavaozana, qgis
Izany no ho ao amin'ny III Free GIS Conference
Ny Konferansa GIS maimaimpoana III dia hatao any Girona ny 11, 12 sy 13 martsa 2009, kelikely taorian'ny fampahafantarana Informática 2009 tao Havana. Ny zoma 13 dia ny atrikasa miaraka, telo maraina ary telo tolakandro novolavola toy izao: atrikasa maraina hariva ...
Criteria amin'ny fisafidianana ny vahaolana GIS / CAD
Androany no andro tsy maintsy nampiharihary ahy tamin'ny fizotran'ny cadastre trano sy tany Bolivia. Ny lohahevitra dia nifantoka tamin'ny taratry ny fomba hisafidianana fitaovana solosaina ho an'ny fampandrosoana géomatik. Ity ny sary nampiasako, ary ny nifantohako dia ny famakafakana ny sahan-kevitra hiandrasantsika ...
ArcView AutoCAD Map Autodesk sivily 3D ESRI Grass gvSIG OS samy hafa GIS
ArcGIS-ESRI, AutoCAD-Autodesk, jeospatial - GIS, GvSIG, IntelliCAD, samy hafa GIS, Microstation-Bentley
Lohateny maimaim-poana ho an'ireo mpampiasa GIS
Ity misy lisitry ny fisintomana izay matetika tena ilaina ho an'ireo mpampiasa ny sehatra CAD / GIS. Ny sasany amin'izy ireo dia tsy misy amin'ireo kinova farany, saingy mbola loharanom-pahalalana izy ireo ary mendrika ny hijerena hatrany ny fanavaozana azy ireo. Fitaovana maimaim-poana Autodesk DWF Viewer hamaky sy hanonta ireo rakitra AutoCAD ...